Mogadishu Journal » 2017 » July » 25
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka BeledXaawo oo la xir xiray
Mjournal :-Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Beledxaawo ayaa xabsiga la dhigay, kaddib markii habeen hore xabsiga lagala baxay afar dhalinyaro lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab, kuwaasoo ciidamada amniga ku toogteen duleedka Beledxaawo, kadibna meydadkooda soo...
Madaxweyne Farmaajo oo qaabilsay safiirka cusub ee Faransiiska
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha Aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha cusub ee dalka Faransiiska u qaabilsan Soomaaliya Mudane Antoine Sivan. Madaxwaynaha iyo Safiirka oo ay weheliyaan Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda Dowladda Federaalka...
Shirka ku saabsan dabagalka qorshaha Qaranka oo Muqdisho ka furmay
Mjournal :-Shirkani oo u dhexeeya wasaaradaha qorsheynta Dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlayo arrimaha dabagalka qorshaha qaranka. Shirka waxaa si rasmi ah u furay wasiirka qorsheynta Dowladda Federaalka...
Askari ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu dilay degmada Wadajir
Mjournal :-Askari ka tirsan Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, iyadoo kooxdii ka dambeysay dilkan ay baxsadeen. Sida ay sheegayaan wararka askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray C/llaahi Cali Maxamed, waxaana la sheegay...
Mjournal :-Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan oo soo gaba gabeeyay safaro uu ku marayay dalalka Khaliijka ayaa dadaal ugu jira sidii loo soo afjari lahaa khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Qatar iyo Isbaheysiga uu hoggaaminayo Sacuudiga. Erdogan oo lugtii u dambeysay...
Mjournal :-Sida ay Shaacisay Warbaahinta dalka Kenya boqolaal qof oo Masiixiyiin ah ayaa ka cararay Kaniisado ku yaalla gobolada ku yaalla dhanka Xeebta ee dalka Kenya Cabsi ay ka qabaan in ay beegsadaan dagaalyahanada Al-Shabaab. Meelaha ugu badan ee dadkaasi ka qaxeen ayaa...
Ciyaaryahan Benjamin Mendy ayaa 52 milyan oo gini ugu soo biiray kooxda Manchester City isagoo ka soo tegay kooxda Monaco. Ciyaaryahankan ayaa noqonaya daafaca ugu qaalsan kubadda cagta adduunka. 23 jirkan u dhashay dalka Faransiiska ee ka dheela dadabka bidixe ee daafaca ayaa...
Kenyan opposition presidential candidate Raila Odinga on Monday fielded questions alone on stage after his rival, President Uhuru Kenyatta, failed to show up for a debate between the two. Odinga, who is the flagbearer for the National Super Alliance coalition, said his top...
Mjournal :- Wararka ka imaanaya magaagalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in howlgal ay iska kaa shadeen Ciidamada amaanka maamulada Galmudug iyo kuwa Puntland lagu qabtay sargaal sare oo katirsan Al Shabaab. Howlgalka wadajirka ah ay fuliyeen ciidamada labada...
Mjournal :-Shir udhaxeeya Madaxda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Africa oo looga hadlaayo sidii ay ciidanka Soomaaliya kula wareegi lahaayeen amaanka dalka markii ay baxaan ciidanka AMISOM ayaa ka furmay Xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho waxa uuna socon doonaa mudo afar maalmood...
Ciidamada xasilinta oo gacanta ku dhigay kooxo burcad
Mjournal :-Ciidamada Xasilinta Muqdisho ayaa xalay howl gal ay ka sameeyeen degmada Yaaqshiid ku soo qabtay koox burcad ah oo dhac ka geysanayay xaafadaha degmadaas, iyadoo is rasaaseyn kooban ay dhex martay. Kooxahan oo gaarayay illaa afar nin hubeysan ayaa la soo qabtay, xilli...